Harcaatonnii waraana PP seeran ala Oromiyaa keessaatti gochaa shoroorkaa uumaa jiraan – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooHarcaatonnii waraana PP seeran ala Oromiyaa keessaatti gochaa shoroorkaa uumaa jiraan
Harcaatonnii waraana PP seeran ala Oromiyaa keessaatti gochaa shoroorkaa uumaa jiraan guyyoottan itti aanaan keessaatti gara moonaa WBO itti dhiyoo jiruutti akka harka kennataan waamicha dhiheessina.
Ibsa ajaja olaanaa ABO/WBO, Adoolessa 5,2021
Sirni faashistii PP Abiy Ahmadiin durfamuu Oromoo waggaa kumaaf cabsee Oromiyaa akka hawwii habashotaatti qircanii itti roorrisuu dhaadannoo jedhuun erga akka haaratti duula qindaawaa saba Oromoo fi Oromiyaa irratti bananii waggoota 4 ol tahee jiraa. Haa tahuutii waggoota darbaan keessa duula Oromummaa, Oromiyaa fi Oromoo cabsuu kana kallattii hundaan burjaajjii uumuun ilmaan oromoo fayyadamuun Oromoodhuma qabsoo bilisummaa isaa dura dhaabuuf yaalii guddoo taasisaa turee. Kanaanis dhalaattoonni Oromoo waraana weerartuu keessatti mindeeffamuun abiddaatti oofamaa turaan bu’aa malee seenaa gurraacha keessaatti qooda fudhachuun ofiifis lubbuun kan dhumaan danuudha.
Yeroo kanaattis weerartoonni impaayera itophiyaa akka duriitti olaantummaa saba ykn eenyummaa qeenxeen itti fufsiisuu barbaadaan bakka hundaatti salphiinni isaan muudataa jiraa. Haaluma walfakkaatuun bakka itti duulaan hundattiyyuu injifatamanii of duuba deebi’uun oromiyaa irraatti human abdii kutatee bobbaasuun oromiyaa irraatti duguuginsa itti fufsiisaa jiruu.
Baatii torbaan dura gaafa lollii impaayera Itoophiyaaf Tigraay eegaluuf tureetti ajaaja olaanaan ABO/WBO ibsa baaseen ilmaan Oromoo lola isaan hin ilaallannee irraa akka qooda hin fudhaanne akkasumaas qawwee isaanii qabachuun uummaata isaanii cinaa akka dhaabbataan waamicha taasisuun keenya ni yaadatamaa. Lollii Tigraay itti fufaa lolaa oromiyaa tahuus dhibdeen lola kana uumee garuu gaaffii eenyummaa sabootaa keessumeessuu diduuf bulchiinsa fiwudaalaa wagga 60n dura tureetti impaayerattii deebisuuf hojii PPn dalagaa jiruudha. Tahullee ilmaan oromoo osoo oromiyaa irraatti waraanni labsamee jiruu lola kana keessaatti qooda fudhachuun kisaaraa tahuu hubachiisuun Lola isa hin ilaallanne keessatti Oromoon akka qooda hin fudhannee akeekaa turee.
Yeroo kanaattis humni habashootaa eenyummaa sabummaa balleessuun Itoophiyaa guddittii afaan tokko saba tokkoof aadaa tokkoo imaammata godhatanii ittiin deeman, kufaatii isaan muudatee irraa raafamaa fi rifaatuu keessa seenuun ilmaan Oromootti fayyadamuun bakka kufanii ol ka’uuf yaalaa jiruu. Harcaatoota loltoota isaanii ammaas oromiyaa keessatti bifa haaraan bobbaasuun ajjeechaa, saamicha fi duguuginsa sanyii gaggeessaa jiruu. Ilmaan Oromoo sirna nama nyaataa faashistii yakkamaa Oromoo fi oromiyaa irratti shoroorkaa labsee kanaaf wardiyyaa taatanii jirtan yeroon itti seenaa keessan haaromfattaan ammaadha.
Ajajoonni, akkasumaas loltoonni sirna nama nyaataa kana ogummaa fi dandeettii keessaniin utubaa jirtaan, sirni kun diigamuun impaayerattii jigsee jiraa. siniif mitii ofiifuu wabii tahuu dadhabee jiraa. Haala kana keessatti isiinis waamicha lammii keessanii dhagahuun waraana bilisummaa oromootti dabalamuun uummata fi biyya keessan Oromiyaa akka tajaajiltaan waamicha isiniif dhiyeessina. Kanaafis guyyoottaan itti aanan kana keessatti gara moonaa Waraana Bilisummaa Oromoo isinitti dhiyoo jiruutti akka makamtaan waamicha isiin akeekna.
Gama kaaniin loltoonni diinan bobbaafamtanii seeran ala Oromiyaa keessa socho’aa jirtaan saba kam keessaallee yoo taatan har’aa irraa eegaluun WBOtti harka kennachuu Kanaan ala daangaa Oromiyaa keessaa bahuun dirqama akka tahee gad jabeessuun Ajajaa olaanaan ABO/WBO akeekkachiisa. Waraanni Itoophiyaa duguugaa sanyii, yakkaa fi cubbuu uummata qulqulluu irratti dalagaa turee guutun guututti diigamuu shiftaa tahee jiraa.
Qaamonni seeraan hidhatanii faashistoota PPn bobbaafamtaan kamillee warren maqaa nageenya eeguun sochootaan dabalatee hataattamaan qawwee keessan waliin akka gara moonaa WBO isinitti dhiyoo jiruutti dhufuun uummata keessaniif wabii taatan isiniin jenna. Qaamni waamicha kanarraa tarkaanfachuun sochii fafee fi baramaa PPn itti bobbaasaa turtee dalaguuf oromiyaa keessa socho’uu kamiyyuu adabbi madaalawaa tahee akka argatuu hubaachiisna.
Walumaagalaatti sirni impaayera itoophiyaa itti fufsiisuuf dhiiga dhangalaasaa jiruu kun moo’atamuu isaa baree gochaa abdii kutannaa fi haaloo bahiinsaa saba oromoo irraatti dalagaa jiru fuldura dhaabbachuun qawwee keessan akka diina kanaatti deebisuun uummata keessan waliin dhaabbattan Ajajaan olaanaan ABO/WBO irra deebiin hubaachiisa.
Waraanni impaayera Itoophiyaa kaaba biyyattiitti jabinaan rukutamuun kutaan waraanaa Shan guutummaatti barbadaa’ee jiraa. Kanaan boodatti humni Itoophiyaa tiksee itti fufsiisuu danda’uus Itoophiyaanis walfaana kutuun caccabanii jiruu. Kanaaf lammiin Oromoo finmindeeffamtoonni Waraana impaayerattii duraan Oromiyaa bakka garaagaraatti bobbaafamaa jirtaan Akka gara Waraana Bilisummaa Oromootti dhufuun uummata keessaniif humna taatan jennaa.
Humni seerawaa fi nagaa waaraa godina Afrikaa fi biyyaa keenya Oromiyaa irraatti fiduuf kabaachiisuu danda’uu yeroo kanaatti dandeettiif beekamtii qabuu Waraana Bilisummaa Oromoo tahuu Ajaja Olaanan ABO/WBO gad jabeesse isiin hubaachiisa. Kanaafis hireen takkittiin ilmaan Oromoo Waraana PP keessa jirtaan qabdaan Waraana Bilisummaa Oromoo waliin hiriiruu nagaa waaraa hawwamuuf WBOn itti jiruu buusuu keessaatti Akka qooda fudhataan Ajajaa Olaanan ABO/WBO gad jabeesse hubachiisa.
Ajaja olaanaa ABO/WBO(AO~ABO/WBO)
Breaking Simbirtuu! Gareen PP Oromiyaa Boombiin Haleelame! January 18, 2021 #Breaking_Simbirtuu Gareen PP Oromiyaa Boombiin…
OPDO/PP wajjiraa #ABO amma yoona banamee turee Oromiyaa hunda keesati cuufsisudhaf karoora gudaa baafatanii jiruu .
OPDO/PP wajjiraa #ABO amma yoona banamee turee Oromiyaa hunda keesati cuufsisudhaf karoora gudaa baafatanii jiruu . Kunis…